कांग्रेसले साषण गर्दा २६ वटा उधोग कारखाना बेच्यो अहिले ठुला कुरा गरिराछ (भिडियो) – Etajakhabar
काठमाडौँ – पूर्वमहान्यायधिवक्ता डा . युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुन् । राष्ट्रियताका पक्षमा प्रष्ट विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने डा . युवराज संग्रौलाले यो देश बिगार्ने गणीतको अँक खेलाउने अर्थशास्त्री भएको बताएका छन् । क्यानडा नेपालका लागि हामिसँग गरीएको एक अन्तरबार्तामा उनले बिकाश पैसा नभई अनुभुति भएको र मानिस निराशा बाट मुक्त भएमात्र बिकाश हुने बताएका छन् । बिकाश हुन मानिसको उत्पादकत्व र क्षमता बिकाश हुनुपर्ने उनले बताए ।
अन्तरबार्तामा उनले बजेटले नेपालीको उत्पादकत्व बढाउने , सिर्जनात्मकलाई स्थापित गर्नुपर्ने , बौदिकतालाई निर्माण गर्नुपर्ने र सँघर्ष गर्ने क्षमतालाइ बिकाश गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलि , झलनाथ खनाल , प्रचन्ड लगायतका ठुला नेताले कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन सक्छन् भन्ने बिश्वासले जनताले जुन ठाउँबाट उठे पनि जिताउन गरेको बताए ।
उनले आर्थिक गतिबिधिलाई सरकारले प्रथमिकता दिनुपर्ने , हरेक परिवारलाई तरकारी उत्पादन गर्न लगाइ स्वावलम्बन बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउदै आफु अर्थमन्त्रि बनेको भए यसो गर्ने बताए । तर आफुलाई मन्त्रिको चाहाना नभएको बताउदै उनले मन्त्रि बन्नु भन्दा बरु किसान बन्ने बिचार ब्यक्त गरे । डा. युवराज संग्रौलासंगको यो कुराकानीको पुरा भिडीयो हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६ समय: १८:०९:०९